Isisombululo ukuba iApple Watch yakho ayikuxeleli ixesha elithethwe noMinnie noMickey | Ndisuka mac
Isisombululo ukuba iApple Watch yakho ayikuxeleli ixesha elithethwe noMinnie noMickey
Iinyanga zihamba kwaye ndiya ndichukunyiswa ngumntu endisebenza naye uMagüi Ojeda. Kungekudala uthathe inyathelo lokuthenga entsha kraca Apple Watch kwi-aluminium yegolide, i-2mm Apple Watch Series 38. Ukusukela oko enayo, wonwabile kodwa ayimlondolozi ekubeni iwotshi imnike iintloko kwizihlandlo ezithile.
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo uthathe isigqibo sokufaka uhlaziyo lwe-watchOS ebesalindile kwaye yintoni eyamothusayo kukuba xa yonke inkqubo igqibile ukubukela kungaziwa yi-iPhone yakhe. Wayeqhagamshela ngeBluetooth, engadibanisi, ukuqala kwakhona i-iPhone kwaye AKUKHO NTO ...
Ejongene nale meko, wandikhangela emsebenzini wandixelela… Pedro! Ndidinga ukuba undincede ngale Apple Watch kuba andinakuyifumana i-iPhone ukuyifumana. Emva kokutshekishwa okuninzi, sithathe isigqibo sokucima useto lweWatch Apple kwaye wenze ikhonkco elitsha kunye ne-iPhone. Emva koku, yonke into yayihamba kakuhle.
Nangona kunjalo, kwiintsuku kamva uphinde wasondela kum kwaye undixelela ukuba ukucofa kukaMickey noMinnie khange baxelele ixesha elithethiweyo xa ecofa ixesha. Ufumanise oku kuba intombi yakhe entle uSofía uyathanda ukuva ixesha elithethiweyo likaMinnie ... lol Ewe, ejongene nengxaki enjalo, Siye sazama ukuyisombulula kodwa emva kwemizamo eliqela asifumananga sisombululo.
Ngaloo mvakwemini, ndafumana umyalezo ovela kugxa wam endixelela ukuba sele enaso isisombululo, esandivuyisa kakhulu kuba ndabona ukuba ukwazile ukufumana isisombululo nangona ndingakhange ndikwazi ukwenza nto. Konke oku kutheni Ndithathe isigqibo sokwenza inqaku elokuxelela into ayenzileyo xa kunokwenzeka into efanayo ukuba yenzeke nakubani na kuni.
Inyani yile yokuba xa uvula ukhetho lukaMickey noMinnie ukuba bathethe ixesha elithethiweyo, akonelanga ukuyivula kwiApple Watch okanye kwisicelo seWatch kwaye yile Umlindo kufuneka uqhagamshelwe kwi-Intanethi ukuze ukwazi ukukhuphela imodyuli yelizwi ayifakayo ukuze kamva ilizwi livakale xa ucinezela kumhlaba othethiweyo. Ke ngoko, into eyenziwe nguMagüi yabeka iApple Watch ukuba ihlawulise ngentambo ngokungenisa kwaye kwangaxeshanye i-iPhone iqhagamshelwe kwinethiwekhi ye-WiFi. Kwilinge lokuqala alizange libe nasiphumo, ke wakhetha ukucima iApple Watch kwaye wayidibanisa kwakhona, emva koko inkqubo yehlisa imodyuli yelizwi kwaye bayifaka, befumana kwakhona iMickey kunye neMinnie spheres ngamazwi abo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » Isisombululo ukuba iApple Watch yakho ayikuxeleli ixesha elithethwe noMinnie noMickey
UAdrian fernandez sitsho
Ukushiya iwotshi inxibelelene kwaye ixhunywe kwinethiwekhi efanayo ne-iphone okoko ikwi-2.4ghz band malunga nemizuzu engama-20 okanye isiqingatha seyure isombulula ingxaki, yenzekile kum okokuqala kwaye emva kokwenza oku sele kukhankanyiwe, ingxaki isonjululwe i-10 ukusuka kwi-10.
Phendula kuAdrian fernandez
SOFIA ukuhambelana namazwi sitsho
Molo Pedro. Njengesiqhelo, eli lelinye lamaqaku akho amakhulu. Ngenye imini undixelele ukuba iindawo ezintsha zabalinganiswa beDisney ziya kufika. Ngaba uyazi nini Ukwanga olukhulu. Ukwanga
Unokulandela le ngcebiso kuqala ngaphambi kokuqalisa kwakhona kunye nokudibanisa kwakhona.
Ukugqibelela, andikhange ndiye kwi-Fri kaMinnie okanye kaMickey kwaye ngokuhlawulisa iwotshi kwaye ndongeze amabakala kwakhona, amazwi ayavakala. Enkosi kakhulu
Iveki yeWWDC, iMac Pro, iPodPod kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
I-Apple iveza iMac entsha kunye ne-iFixit ihambisa i-tab kunye neekiti zayo zokwandisa